အဆိုပါဖွင့်လှစ် GDB - ဖိုင် FORMAT - 2019
ပွင့်လင်း format နဲ့ GDB
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge များတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားလူကြိုက်များ browser များ, Extension ဖြည့်စွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၌တည်၏။ သူတို့ထဲကတချို့ကတစ်ဦးက Web Browser ကိုအသုံးပြုပါအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် installed နေကြသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge များအတွက်အကောင်းဆုံး extension များ
ယနေ့အတွက် Windows Store ကို Edge 30 extension များရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌များများစားစားတန်ဖိုးကိုသယ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏ရှေ့တော်မှောက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုရှိသူများရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က extension များအများစုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့သင့်ပါတယ်။
အရေးကြီး! extensions တွေကို Installing သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ update ကိုနှစ်မြောက် Update ကိုရှိတယ်လို့ပေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Adblock AdBlock နှင့်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို
ဒါကအားလုံး browser များပေါ်လူကြိုက်အများဆုံး extension များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ AdBlock သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အင်တာနက်ဆိုက်များတွင်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီတော့သင်စတာတွေဟာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, pop-ups, YouTube ပေါ်မှာတစ်ဗီဒီယိုမှာကြော်ငြာထည့်သွင်းကြောင့်အာရုံခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ဒီလိုလုပ်ဖို့ရုံ extension ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့် enable ။
AdBlock extension ကို Download လုပ်ပါ
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ။ သို့သော်ယခုဤ extension အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတနှစ်အောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နှင့် Microsoft သည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများကိုအကြောင်းကိုသတိပေးလိုက်သည်။
extension ကိုဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို Download လုပ်ပါ
Web ကိုညှပ် OneNote, Evernote နှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Pocket မှ
လိုအပ်ခဲ့လျှင်ညှပ်သင်ကြည့်နေတဲ့စာမျက်နှာ, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအပိုင်းအစကယ်တင်လျင်မြန်စွာ, အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့မလိုအပ်သောကြော်ငြာများနှင့်အညွှန်းဘားမပါဘဲအတိအကျအသုံးဝင်သော post ကိုဧရိယာရွေးချယ်နိုင်သည်။ clip ဆာဗာသို့မဟုတ် OneNote Evernote (က extension ကိုအပေါ်မူတည်) ရက်နေ့တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ဤတွင် OneNote Web ကိုညှပ်၏အသုံးပြုမှုသည်:
တစ်ခု extension ကို OneNote Web ကိုညှပ် Upload လုပ်ပါ
ဒါ - Evernote Web ကိုညှပ်:
Evernote Web ကိုညှပ် extension ကို Download လုပ်ပါ
Pocket မှ Save ယခင်ဗားရှင်းများတွင်ကဲ့သို့တူညီသော function ကိုရှိပါတယ် - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာမကျြနှာဘေးဖယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြကျမ်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး store မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Pocket မှကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ခု extension ကို Upload လုပ်ပါ
အဆင်ပြေ, အွန်လိုင်းဘာသာပြန်ဆိုသူလက်မှာအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကနေကော်ပိုရိတ်စကားပြန်နှင့် ပတ်သက်. Edge browser ၏ချဲ့ထွင်မှုမှတဆင့်ရယူနိုင်သည့်ဝင်ရောက်ခွင့်စကားပြောနေကြသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Translator အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ click နှိပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့လိပ်စာဘားနှင့်စာမျက်နှာတွင်ပြသပါလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းစာသားလုပ်ကွက်ကို select နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါ။
တစ်ခု extension ကို Microsoft က Translator Upload လုပ်ပါ
ဤ extension တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သူတို့၏အကောင့်ပေါ်တွင် passwords တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါ LastPass လျင်မြန်စွာ, ဆိုက်အသစ်တစ်ခု login နဲ့ password ကို save တည်ဆဲသော့တည်းဖြတ်တဲ့ password ကို generate နှင့်သင့် repository ကိုရဲ့ contents စီမံခန့်ခွဲရန်အခြားအသုံးဝင်သောရွေးချယ်စရာကိုသုံးနိုင်သည်။
မိမိရဲ့စကားဝှက်အားလုံးကို encrypt လုပ်ထားပုံစံအတွက်ဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆင်ပြေ သူတို့ထိုကဲ့သို့သော password ကိုမန်နေဂျာအဖြစ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဘရောက်ဇာပေါ်တွင်သုံးနိုင်တယ်။
LastPass extension ကို Download လုပ်ပါ
ဤ extension ကို Microsoft Office ကို၏အွန်လိုင်းဗားရှင်းအမြန် access ကိုပေးသည်။ သင်, ရုံး applications များထဲကတစ်ခုပြောင်းရန်ဖန်တီးသို့မဟုတ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖွင့်နိုင်သည်နှစ်ခုကလစ် "ဟုမိုဃ်းတိမ်ကို။ "
ရုံးအွန်လိုင်း၏ extension ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါအလင်းများဟာ Off Turn
Edge browser မှာဗီဒီယိုများလွယ်ကူသောကြည့်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါအလင်းများဟာ Off Turn အိုင်ကွန်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းပြီးနောက်, ရွာ၏ကျန်အလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်အလိုအလျှောက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒီ tool ကဆိုဒ်များ hosting အားလုံးသိကြဗီဒီယိုအပေါ်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဆိုပါမီးပိတ်ကာ extension ကိုပြန်လာ Upload လုပ်ပါ
ယခုအချိန်တွင် Microsoft က Edge extension များ, အခြား browsers တွေ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအကွာအဝေးပူဇော်မထားဘူး။ Windows အ Store မှာက်ဘ်ကိုရယူရန်အသုံးဝင်သော tool များ၏ရသေးနံပါတ်, သင်လိုအပ်သော updates များကို install လုပ်ထားလျှင်သင်, သင်တန်း၏, ယနေ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။